VPN: အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိကနှင့်လုံခြုံသော VyprVPN APK ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » VPN ကို: အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိက & လုံခြုံ VyprVPN
VPN ကို: အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိက & လုံခြုံ VyprVPN APK ကို
VyprVPN ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်န့်အသတ် virtual private network (VPN) သို့နှင့်အတူသင်၏အွန်လိုင်း privacy ကိုပြန်ယူပါ။ , သင့်ကိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် secure သင့် IP ဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အွန်လိုင်းဝိသေသလက္ခဏာကိုကာကွယ်ပေးရန်ဆိုစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ပါ။ Access ကိုပထဝီပိတ်ဆို့နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကန့်သတ်သို့မဟုတ် download, ဦးထုပ်မပါဘဲတားမြစ်ထားသောအကြောင်းအရာများ။
Android အတွက် VyprVPN ရဲ့ features တချို့ကိုထုတ်စစ်ဆေး:
•3နေ့အခမဲ့ VPN ကိုစမ်းသပ်
အခမဲ့ VyprVPN အန္တရာယ်ရယူပါ။ အဘယ်သူမျှမကတိကဝတ်များနှင့်လွယ်ကူသောဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံနှင့်ပုဂ္ဂလိကကွန်နက်ရှင်ကြိုးစားပါ။
•အား လွတ်လပ်. သုညသစ်ခုတ်များအတွက်စာရင်းစစ်ဆေး
VyprVPN တစ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းနှင့်လွတ်လပ်စွာသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှု, မှတဆင့်ကူးစက်သောစောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်တတိယပါတီများနှင့်ထိတွေ့ခံရလုံးဝအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ Log in ဝင်ရန် VPN ကိုစာရင်းစစ်ဆေးသည်။ ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမမှတ်တမ်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်လေးစားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသူများအများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထိတွေ့သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားခံရဖို့ခွင့်ပြုဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
• Access ကို Unlimited အကြောင်းအရာ
ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်လုံခြုံတဲ့ချိတ်ဆက်မှုသင်အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာဖွင့်ရန်အဘယ်သူမျှမဒေတာထုပ်နှင့်သင်၏ပြပွဲနှင့်ရုပ်ရှင်ကို download လုပ်ပါ။ သင်တို့နေရာနေပါစေ, ငါတို့သည်သင်တို့ဖုံးလွှမ်းရရှိပါသည်။
• 70 + ကို Global ဆာဗာတည်နေရာများ
70 +6ဖြတ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း server ကို VPN ကိုတည်နေရာ, 700 + ဆာဗာများနှင့် 200,000 + ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက် continents နှင့်အတူ, သငျသညျလုနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဝဘ်ဝင်ရောက်ဖို့အပေါငျးတို့သပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
•အဘယ်သူမျှမ Shady 3rd ပါတီများ
ကျွန်တော်တို့သည်အင်ဂျင်နီယာပိုင်ဆိုင်ကျနော်တို့လုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုကယ်မနှုတ်နိုင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မရှိပဲ VPN ဆာဗာစီမံခန့်ခွဲ။
•ဂိမ်း & လွှများအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်မြန်နှုန်း
, streaming များသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲကစားသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြှင့်ဆာဗာများတိုးမြှင့်အမြန်နှုန်းနှင့်ပိုမြန်ကွန်နက်ရှင်ကြိမ်အာမခံပါသည်။ ရှုံးနိမ့်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ။
laptop, တက်ဘလက်, စမတ်ဖုန်း, router သို့မဟုတ်တောင်မှသင်၏ TV - VyprVPN အားလုံးသင့်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုလုံခြုံစောင့်ရှောက်။ အန်းဒရွိုက်, Window, iOS နှင့်ပိုပြီးပေါ်ရရှိနိုင် VPN ကို app ကို။
Chameleon ™ပရိုတိုကောများနှင့်• Strong ပြန်ဖွင့်
မည်သည့် firewall ကကျောင်းမှာပိတ်ဆို့ခြင်း, ကောလိပ်သို့မဟုတ်အခါသင် VyprVPN ရဲ့ထူးခြားတဲ့နည်းပညာနှင့်အတူသွားလာအတိတ်ရယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Chameleon ™ပရိုတိုကောကအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသို့မဟုတ်အစိုးရများကမှတ်မိမယ့်သေချာစေရန်သင့်ရဲ့ connection ကို scrambles ။
•မတည်ငြိမ် Connections ကိုအတွက် "ပြောင်းလဲမည် Kill"
VyprVPN ပြတ်တောက်သွားပါသည်သို့မဟုတ် enabled မပါသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ "ပြောင်းလဲမည် Kill" အင်္ဂါရပ်အင်တာနက် traffic ကိုရပ်လိုက်နိုင်သည်။ သငျသညျ VPN ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိဘဲအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ဘယ်တော့မှအဖြစ်ဒါကအများဆုံးလုံခြုံရေးသေချာ။
NAT Firewall ကိုအတူ•အပိုလုံခြုံရေး
VyprVPN ရဲ့ NAT firewall ကနှင့်အတူ, browse နှင့်စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်အအွန်လိုင်းစျေးဝယ်, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းမှဟက်ကာများကိုရပ်တန့်။
တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အစမ်းပေါ်တွင်သင်တစ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ကြော်ငြာအခမဲ့ app ကိုအတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ်။
• 24x7x365 ပံ့ပိုးမှု
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး Virtual Private Network ကိုသုံးမလား?
သို့တိုင်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့ရှိသမျှကိုသင့်ကွန်ရက်အသွားအလာအဘို့အ VyprVPN ကိုသုံးပါသင့်သလဲသေချာမ ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VPN ကို App နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းအကြောင်းပြချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
•သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးတိုးပှားစ - Encrypt နှင့် secure သင်၏ဝဘ်ဆက်သွယ်မှု, wifi ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် hardwired, ဟက်ကာများကိုစောင့်ရှောက်ရန်သို့မဟုတ် Third-party သင့်ရဲ့ browsing အတွက်လှုပ်ရှားမှုကြည့်ရှုရာမှ snoops ။
• Bypass လုပ်ရကန့်သတ်ကွန်ယက်နှင့်ဆင်ဆာ - တရုတ်မဟာ Firewall ကိုအပါအဝင်ကျောင်းသို့မဟုတ်အစိုးရမဟုတ်သောဆင်ဆာ Escape ။ အဆိုပါလုပ်ကွက်န်းကျင်အရကျွန်တော်တို့ရဲ့ VPN ကိုအတူပုဂ္ဂလိကဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဖန်တီးပါ။
•သင့်လွှနှင့်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံပိုမိုကောင်းမွန်စေမ - အရပျ၌ရှုံးနိမ့်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာထားသင့်ရဲ့ Internet Service Provider များက
• Unblock & Access ကို Geo-Blocked အကြောင်းအရာ - ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့အများနှင့်လက်လှမ်းမီန့်အသတ်အကြောင်းအရာများအတွက်တစ်ဦးထံမှအိုင်ပီတည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ။
•ရှုံးနိမ့်ဒေတာများကို retention - ဝှက်ထားသင့်ဒေတာကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှငျ့သငျမွငျနိုငျသောအရာကိုကျော်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုကိုရပ်တန့်။ VyprVPN လွတ်လပ်စွာယင်း၏သုညမှတ်တမ်း status ကိုအတည်ပြုရန်စာရင်းစစ်ဆေးသည်။
သငျသညျအဆင်သင့်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဖြစ်ကြသည်။ အခမဲ့သုံးရက် 100% များအတွက် VyprVPN ကြိုးစားပါ။
VPN ကို: အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိက & လုံခြုံ VyprVPN
13.80 ကို MB
ရွှေဖား, GmbH သည်